डार्क बतख टेप प्रयोगमा ग्लो
तपाईं Triboluminescence को उदाहरण हेर्न को लागि बतख टेप को उपयोग गर्न सक्छन्, जब केहि सामाग्री यांत्रिक तनाव वा घर्षण को अधीन हुन्छ बन्द चमक। बतख टेप (वा डक्ट टेप) Triboluminescence परियोजना धेरै सजिलो छ र प्रयास गर्न केहि सेकेन्ड लिन सक्दछ। यसले कुरा गर्दैन कि तपाइँ टेप बतख टेप वा डुप्लिकेट टेप बोल्नुहुन्छ, तर तपाईंको नतीजा तपाईले प्रयोग गर्नुभएका ब्रान्डमा आंशिक रूपमा लगाउँछन्: ह्यानकल ™ राम्रोसँग काम गर्दछ।
टेपको दुई स्ट्रिपहरू फाल्नुहोस्। चिपचिपा पक्षहरू एक-अर्काको सामना गर्दै टुक्राहरू सँगै रहनुहोस्, पर्याप्त टेप छोडेर तपाईं स्ट्रिपहरू अलग गर्न सक्नुहुन्छ। रोशनीहरू घुमाउनुहोस्। अँध्यारोमा समायोजन गर्न एक मिनेट वा दुई दिनुहोस्। टेपको स्ट्रिपहरू छोड्नुहोस्।
के तपाईंले नीला रेखा जहाँ टेप अलग गर्नुभयो देख्नुभयो? यो triboluminescence हो , जो लुमेननेसिस को एक प्रकार हो जुन यांत्रिक ऊर्जा वा विद्युत ऊर्जा द्वारा घर्षण जस्तै कार्रवाई देखि उत्पन्न हुन्छ। तपाईं पनि अन्य प्रकारका टेपबाट पनि प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक राम्रो प्रयास गर्न को लागि पारदर्शी स्कचच ™ टेप हो। यदि तपाईंसँग कठोर समय सँगै उनीहरूको चिपचिपा पक्षहरूसँग टेपको अलग-अलग स्ट्रिपहरू छन्, तपाईं ट्रकको (तुरुन्त) बन्द गरेर सजिलै ट्रकोल्युमिनेन्स चमक देख्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि प्रकाश हल्का रूपमा उज्यालो हुनेछैन।
प्राकृतिक ईस्टर अन्डा रंगहरु
कूल बर्फको साथ कूल चीजहरू गर्न
कसरी फाइट्रोयको तूफान ग्लास बनाउने
क्रिस्टल पाइनकोन गहने
कैसे क्रिस्टल देखि गलत रत्न बनाउन को लागि
अनुभवी जल को अनुष्ठान को लागि
पाठ प्लान क्यालेन्डर सिर्जना गर्नुहोस्
बेरोजगारीको प्राकृतिक दर
कसरी स्पेनिसमा सहायक शब्द "माइट" अनुवाद गर्न
महिलाको बुद्धिलाई मनाउन क्रियानिङ समारोह
पांडुलिपि संस्करण: गणतान्त्रिक युद्धको गणतन्त्र
65 पूर्व छात्र निवासियों को लागि आवास र यात्रा मा
3 सामान्य मकोनिकल ईंन्धन पम्प समस्याहरू
संवाद: शहर र देश
ओमाहा उच्च-कमका लागि सुझाव
Oseberg - नर्वे मा वाइकिंग शिप Burial
'कालो स्वान' र महिला जीवनको Duality
राष्ट्रपति विलियम म्याककेले को हत्या
1952: राजकुमारी एलिजाबेथ रानी को 25 मा
सबैभन्दा मूल्यवान खेल कार्डहरू पहिचान गर्दै
आयरिश अन्तिम नाम: आयरल्याण्डको साधारण उपनाम
आदर्श ग्यासको निरन्तर दबाब अन्तर्गत उदाहरण समस्या
स्टोबोर्डबोर्डमा सवारी गर्न स्नोबोर्ड ब्यान्डिङ कसरी सेट अप गर्नुहोस्
Ergonomics को लागि एक मानव मनोचिकित्सा मेकअप के छ?
चित्रकारी रंगको कक्षा: टोन वा मूल्यहरू